Su'aalaha La Weydiiyo - Shenzhen Hengxing Mashiinka Mashiinka Baako Co., ltd.
Ma waxaad ka ganacsataa shirkad ama soo saare?
Waxaan nahay warshad, mashiinada oo dhan annaga ayaa iskeen u sameysanna waxaanan ku siin karnaa adeegyo habeysan iyadoo loo eegayo baahidaada.
Aaway goobtii warshaddu? Sideen ku booqan karaa halkaas?
Warshaddeenu waxay ku taal Shenzhen, Shiinaha. Waxaad nagu soo booqan kartaa diyaarad. Waxay u jirtaa oo keliya 25 daqiiqo warshaddeena illaa Shenzhen International Airport. Waxaan kuu diyaarin karnaa gaari aan kugu soo qaadno halkaas.
Muddo intee le'eg ayaa dhalmadaadu tahay?
Guud ahaan waa 3-5 maalmood haddii alaabtu taallay. ama waa 15-45 maalmood haddii alaabtu aysan oollin, iyadoo lagu saleynayo tirada iyo shuruudahaaga. Waxaan ku gaarsiin doonnaa waqtiga loogu talagalay oo ah taariikhda aan ku heshiinnay labada dhinac.
Sideen ku rakibi karaa mashiinkeyga markuu yimaado?
Waxaan ku siin doonaa fiidiyowyo rakibid iyo casharro, ama sidoo kale waxaan diyaarin karnaa wicitaan fiidiyoow ASAS mashiinku wuxuu diyaar u yahay goobtaada si uu kuu baro sida loo wado mashiinnada. Haddii aad u baahatana, waxaan sidoo kale u diri karnaa injineerkeena dhinacaaga si uu kaaga caawiyo inaad tijaabiso oo aad u tababarto farsamayaqaannadaada.
Ka waran haddii mashiinku xumaado inta la isticmaalayo?
Alaabtayada si taxaddar leh ayaa loo kormeeri doonaa loona hubin doonaa ka hor bixinta, waxaanan bixin doonaa tilmaamaha saxda ah iyo fiidiyowyada loogu talagalay isticmaalka alaabada; intaa waxaa sii dheer, badeecadeenu waxay taageertaa adeegga dammaanadda nolosha, haddii ay jiraan wax su'aalo ah inta lagu jiro isticmaalka alaabta, fadlan la tasho shaqaalaheena.
Waa maxay dammaanadda haddii aan kaa iibsanno?
Dhamaan mashiinada nalaga dalbaday waxay bixin doonaan hal sano oo damaanad ah laga bilaabo taariikhda bixinta. Haddii ay jiraan qaybo muhiim ah oo ku jaban dammaanadda oo aysan keenin hawlgal aan habboonayn markaa waxaan ku siin doonnaa qaybaha cusub bilaash.
Waa maxay lacag bixinta aad aqbasho?
Waxaan guud ahaan u isticmaalnaa T / T ama L / C aragtida, waana ka wada xaajoon karnaa habka lacag bixinta.
Adeegyada iibka kahor:
1. Bixinta taageero farsamo oo xirfad leh.
2. U dir buugga alaabta iyo fiidiyowga hawlgalka.
3. Haddii aad su'aal qabtid PLS nagala soo xiriir khadka tooska ah ama email noo soo dir, waxaan kuu ballanqaadeynaa inaan ku siin doonno jawaab marka ugu horreysa!
4. Wicitaanka shakhsi ahaaneed ama booqashada warshadda si diiran ayaa loo soo dhaweynayaa.
1. Waxaan kuu balanqaadeynaa daacadnimo iyo cadaalad, waxaa farxad noo ah inaan kuu adeegno sidii lataliyahaaga wax iibsiga.
2. Waxaan dammaanad ka qaadeynaa waqtiga, tayada iyo tirada oo si adag u fulineyno shuruudaha heshiiska.
3. Waxaan diirada saareynaa inaan ku siino hal-talaabo oo ah shuruudahaaga
1. Halkee laga iibsadaa alaabtayada muddo 1 sano ah oo dammaanad qaad iyo nolol dheeri ah.
2. 24-saac adeega taleefanka.
3. Kayd aad u tiro badan oo isugu jira qaybo iyo qaybo, qaybo si fudud loo xidho.
4. Injineerku wuxuu u adeegi karaa albaab ilaa guri.